MakeOwn.App - Onye nrụpụta ngwa mkpanaka maka iOS na gam akporo
Tụgharịa asụsụ & nweta ngwa efu!
weebụsaịtị Nrụpụta Ekwentị mkpanaka ngwa
Free Trial Banye
Mee ngwa mkpanaka gị maka
iOS na gam akporo na -enweghị nsogbu ọ bụla!
MakeOwn.App bụ onye na -ewu ngwa mkpanaka ekwentị mkpanaka. BuildFire kwadoro ya ma kwado ya na sava AWS.
Ngwa ikpo okwu ngwa anyị na -enyere ndị azụmaahịa na ndị ọchụnta ego n'ụwa niile aka iwu
ma bipụta ngwa na -aga nke ọma, na -edeghị otu koodu koodu.
Malite ikpe ụbọchị iri atọ
Enweghị Kaadị E Si Nweta Achọrọ
Ekwentị mkpanaka ngwa
MakeOwn.App bụ ụzọ kachasị ọsọ na kachasị mfe iji mepụta ngwa mkpanaka ndị ọkachamara.
Onye na-ewu ngwa na-adọkpụ na-dobe
Naanị dọrọ na dobe ụzọ gị site na iwu ngwa site na ọkọ, ma ọ bụ hazie otu ndebiri.
Platform dị ike ma na -agbanwe agbanwe
Ulo elu ụlọ nke ngwa anyị dị ike ma na -agbanwe agbanwe ka ọ nwee ike tụọ gị ka azụmahịa gị na -eto.
Ịzụta n'ime-App na zụọ ahịa
Kwado atụmatụ e-Commerce na ngwa gị wee malite ịkpata ego na ọdịnaya gị ma ọ bụ naanị ree ngwaahịa.
Mfe na -ekwusara ozi ọma n'ọma ahịa
Otu ịpị bụ naanị ihe ọ ga-ewe iji bipụta ngwa gị na Apple App Store na Google Play Store.
Ngwa ngwa ngwa haziri nke ọma
Onye na -ewu ngwa mkpanaka anyị DIY na -enye gị ohere ịhazi akụkụ niile nke ngwa gị ngwa ngwa na -edeghị koodu ọ bụla.
Ịma Ọkwa Mgbasa Ọsọ
Dịkwuo itinye aka na njigide nke ndị na -ege gị ntị, site na izipu ozi ngosi amamịghe dị mma.
Mụtakwuo maka ikpo okwu anyị
Jiri ngwa mgbakwunye tinye ngwa dị ike na ngwa gị.
Ahịa Njirimara anyị gụnyere ọtụtụ ọrụ na -ekpuchi ọtụtụ mkpa ngwa ọ bụla.
Maka omenala nke ukwuu ma ọ bụ atụmatụ pụrụ iche, ị nwere ike mepụta ngwa mgbakwunye nke gị, ma ọ bụ ka anyị zụlitere gị ya.
Ihe Mere Họrọ
Ngwọta Niile Dị Otu iji Wulite Ngwa
Ekwela nkwa enweghị afọ ojuju na afọ ojuju
Rụọ n'otu oge maka Ngwaọrụ niile
Gbanwee webụsaịtị gị na blọọgụ gị ka ọ bụrụ ngwa
Tụgharịa asụsụ ngwa gị n'asụsụ ọ bụla
Jikọọ na Mgbasa ozi Google na Facebook
Ihe ndebiri emeburu na foto ngwaahịa
Onye mmekọ teknụzụ anyị bụ BuildFire
Anyị na -akwado ngwa na sava Amazon
Jiri Zapier na Nkebi kwalite ngwa gị
Ihe Nlereanya Ngwa
Lelee ụfọdụ ngwa nke onye wuru ngwa mkpanaka anyị mere.
Budata ngwa anyị
Ụgwọ na Atụmatụ
Anyị na-enye atụmatụ maka azụmaahịa na ọrụ niile.
Ị nwere ike nwalee ọrụ anyị ụbọchị 30 n'efu, enweghị kaadị kredit achọrọ ma ọ bụrụ na ị kpebie ịdenye aha na otu atụmatụ anyị,
ị ga-enwekwa nkwa azụghachi ụbọchị iri atọ.
Kwa Afọ 50% Gbanyụọ
Ihe niile ịchọrọ ịmalite ịrụ ngwa nke gị.
Ahịa: $ 324
Ngwa Android na iOS
Ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba
Ntinye ngwa n'efu
Jiri ikike na atụmatụ ndị ọzọ bulie ngwa gị.
Ahịa: $ 684
Jiri ohere kacha dị elu bulie ngwa azụmaahịa gị.
Ahịa: $ 2124
Agụnyeghị ụtụ isi.
Ị bụ ebe nchekwa anụmanụ,
ma ọ bụ otu nnapụta anụ ụlọ?
Ka anyị kwado ọrụ gị! Ọ ga -abụ nnukwu nsọpụrụ anyị
iji nyere ndị hụrụ anụmanụ n'anya aka ịzụlite ngwa n'efu.
Kpọtụrụ anyị ịmụtakwu ihe.
Ị bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na -ere ahịa,
ma ọ bụ nwee ọtụtụ ngwa?
Idenye aha na mmemme mmekorita nke Reseller ma nweta ego ego maka ọrụ anyị niile enyere anyị.
Gị Ndị na-ere ahịa ịmụtakwu ihe.
Ị nwere ajụjụ? Chọta azịza n'ime ọdọ Àmamihe ma ọ bụ gaa na Help Center.
Nweta usoro mmepe ngwa mkpanaaka kachasị ọhụrụ, usoro na mmelite.
Kedu ihe bụ njikarịcha ibe ngwaahịa?
Nkwalite ibe ngwaahịa Apple (PPO) so na atụmatụ na-atọ ụtọ na nso nso a maka ndị nrụpụta ngwa na ndị na-ere ahịa. Ebe ọtụtụ nde ngwa dị na App Store, ọ na-esiwanye ike ịhụta ya. Ọ bụ ya mere iji njikarịcha ibe ngwaahịa ga-enye gị ihu n'ihu asọmpi gị. Gịnị bụ njikarịcha ibe ngwaahịa? […]
Usoro egwuregwu mkpanaka na-ada ada na otu esi edochi ha
Ụdị egwuregwu ekwentị na-aga n'ihu na-agbanwe kwa afọ, na ntinye aha Facebook na-adịbeghị anya na Meta nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ọdịnihu nke egwuregwu ndị a. Facebook rụrụ ọrụ dị ukwuu n'inyere egwuregwu ekwentị aka inweta ewu ewu na mbụ, yana ọhụụ maka ihe mgbakwunye ọhụrụ na 3D na mebere […]
Ụzọ 11 iji mee vidiyo na-akwụghachi ụgwọ maka ntinye ego In-app na-amasị ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ị ga-esi mee ka ndị ọrụ na-etinye aka na ngwa gị mgbe niile wee bulie ndogide, mgbasa ozi vidiyo akwụgoro bụ ụzọ dị mma isi mee ya. Vidiyo ndị akwụgoro ụgwọ na-enyere ndị ọrụ aka ịnata ụfọdụ ụgwọ ọrụ in-app site na ilele mgbasa ozi vidiyo dị mkpirikpi maka oge a kara aka. Dabere na ụgwọ ọrụ na ụdị nke […]
Kpọọ onye ọkachamara n'efu
Kedu ihe kpatara MakeOwn.App
Lelee ụfọdụ akara ụwa anyị:
Usoro ojiji · amụma nzuzo · Afọ Ojuju nkwa
© 2022 Ụlọ ọrụ 3DMA Ltd.. Ikike niile echekwabara.
Anyị na -eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na ịmegharị nleta ugboro ugboro. Site na ịpị "Nabata ihe niile", ị kwenyere na iji kuki niile.